I-Levalbuterol vs.Albuterol: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe - Iziyobisi Vs. Umhlobo | Eyenkanga 2021
Impilo-Ntle Inkampani, Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Impilo Ukuphuma Inkampani Iziyobisi Vs. Umhlobo Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Ekuhlaleni Imfundo Yezempilo, Iindaba Uluntu, Impilo Uluntu, Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Ukuzonwabisa Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi
Eyona >> Iziyobisi Vs. Umhlobo >> I-Levalbuterol vs.Albuterol: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Levalbuterol vs.Albuterol: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Levalbuterol kunye ne-albuterol ngamachiza amabini asetyenziselwa unyango lwe-bronchospasm enxulumene nesifuba kunye nesifo esinganyangekiyo sesifo semiphunga (COPD). Isifo sombefu sisifo sokuphefumla esichaphazela abantu bayo yonke iminyaka. Lubonakala ngokuphefumla, ukukhwehlela, ukuphefumla kancinci, kunye nokuxinana kwesifuba. Kuqikelelwa ukuba umbefu ichaphazela malunga nabantu abazizigidi ezingama-24 eUnited States, kubandakanya abantwana abazizigidi ezisixhenxe.
ICOPD , ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuyo njenge-emphysema, inempawu ezifanayo nesifuba, kodwa ikwabandakanya ukuveliswa kwencindi eshinyeneyo kwindlela yomoya. Isizathu ngqo sesifo sombefu asaziwa, kodwa uninzi lwezigulana eziphuhlisa i-COPD zinembali yokutshaya okanye ukubhencwa ixesha elide kwiziphazamiso zemiphunga.
I-Bronchospasm ichaza inkqubo eyenzeka kwi-asthma kunye ne-COPD apho ikhontrakthi yomoya, eyenza kube nzima ukudlula emoyeni. Ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba yi-bronchoconstriction. I-Levalbuterol kunye ne-albuterol zombini ziphatha i-bronchospasm, kodwa zisebenza ngokwahlukileyo.
Yintoni umahluko ophambili phakathi kweLevalbuterol kunye neAlbuterol?
I-Levalbuterol sisiyobisi esikhutshiweyo esikhetha ngokuphakathi, esenza i-beta-2-receptor agonist (SABA) emfutshane. I-Levalbuterol yeyona nto isebenza ngakumbi kwi-R-enantiomer yomxube we-albuterol wobuhlanga. I-Levalbuterol ivuselela ii-beta receptors ezikhokelela ekuphumleni kwe-bronchial kunye ne-tracheal muscle egudileyo kunye nendlela evulekileyo yomoya. I-Levalbuterol iyafumaneka njenge-metered-dose inhaler (MDI) ehambisa idosi eyi-45 mcg ngokwenza okuthile. Ikwafumaneka njengesisombululo ekufuneka sisetyenzisiwe kumatshini we-nebulizer. Isisombululo se-nebulizer siyafumaneka kwi-0.31 mg / 3 ml, 0.63 mg / 3 ml, kunye ne-1.25 mg / 3ml.
I-Albuterol sisiyobisi esinyanzelekileyo esikhetha ngokuphakathi, i-beta-2-receptor agonist (SABA) emfutshane. I-Albuterol ngumxube wobuhlanga we-R-enantiomers kunye ne-S-enantiomer kunye ne-R-enantiomer njengeyona nto isebenza ngakumbi kunye nesithako esisebenzayo kwi-levalbuterol. I-Racemic albuterol iyafumaneka kwiipilisi zomlomo kumandla okukhupha kwangoko i-2 mg kunye ne-4 mg kunye nokukhululwa okwandisiweyo kwe-4 mg kunye ne-8 mg. I-Albuterol ikwafumaneka kwisisombululo somlomo kuxinzelelo lwe-2 mg / 5 ml. I-Albuterol iza ne-inhaler yedosi ye-metered ehambisa i-90 mcg nge-actuation nganye kunye nezisombululo ezahlukeneyo ze-nebulizer.
Umahluko ophambili phakathi kweLevalbuterol kunye neAlbuterol
Iklasi yeziyobisi Ngokukhetha phakathi kwe-beta-2-agonist emiselweyo Ngokukhetha phakathi kwe-beta-2-agonist emiselweyo
Ngubani igama lophawu? Xopenex IproAir, Proventil, Ventolin, Accuneb, Vospire
Zeziphi iifom eza nalo iziyobisi? Inhaler yethamo lokulinganisa, isisombululo se-nebulizer Inhaler yedosi emiselweyo, isisombululo se-nebulizer, iipilisi zomlomo, isisombululo somlomo
Ithini idosi esemgangathweni? 0.63 mg nge-nebulizer okanye i-45 mcg nge-MDI qho kwiiyure ezi-4-6 2.5 mg nge-nebulizer okanye i-90 mcg nge-MDI qho kwiiyure ezi-4-6
Lude kangakanani unyango oluqhelekileyo? Ixesha eliphakathi, elifutshane Ixesha eliphakathi, elifutshane
Ngubani oqhelekileyo usebenzisa amayeza? Abantwana abaneminyaka emi-4 ubudala nangaphezulu, abantu abadala Iintsana, abantwana, abantu abadala
Imiqathango ephathwe yiLevalbuterol kunye neAlbuterol
I-Levalbuterol kunye ne-albuterol zombini zisebenza ngokukhuthaza ii-beta receptors ukubangela ukuphumla kwemisipha egudileyo kwindlela yomoya, ngaloo ndlela ivumela i-airways ukuba ivule kwaye ihambise umoya ongaphezulu kwimiphunga ngokuxhathisa okuncinci.
Zombini i-levalbuterol kunye ne-albuterol zi-FDA ezivunyiweyo kunyango lwesifo se-asthma, i-bronchospasms yexeshana okanye ivili, kunye ne-bronchospasm enxulumene neCOPD. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba akukho ziyobisi zivunyiweyo njengeprothylaxis, okanye uthintelo, kwezi zinto zibonakalisiweyo. Nangona kunjalo, i-albuterol ivunyiwe ukuba isetyenziswe kwiprophylaxis ye-bronchospasm ebangelwa kukuzilolonga. Ngokwesiqhelo, i-albuterol yayiya kwenziwa kwimizuzu eli-15 ngaphambi kokuzilolonga okulindelweyo ukunciphisa ukubakho kwe-bronchospasm ebangelwa kukuzilolonga. I-Levalbuterol ngamanye amaxesha isetyenziselwa ngaphandle kwelebheli kwesi salathisi ngokunjalo. Ngaphandle kwelebheli kuthetha ukuba iyeza alivunyelwanga ukuba lisetyenziswe kolu boniso nguLawulo lokutya kunye noLawulo lweziyobisi (FDA).
Le tshathi ilandelayo idwelisa ezona zixhobo zisetyenziswayo kwezi ziyobisi. Ngumboneleli wakho wezempilo kuphela onokumisela ukuba la machiza afanelekile kwimeko yakho. Kwiimeko zesifo sombefu esibuhlungu kunye neCOPD bronchospasm, nceda ufune unyango kwisebe lezongxamiseko elikufutshane.
Imeko Levalbuterol I-Albuterol
Ukunyuka kwesifo sombefu Ewe Ewe
Ithutyana bronchospasm / episodic wheezing Ewe Ewe
Ukuzivocavoca kwe-bronchospasm prophylaxis Ngaphandle kwelebheli Ewe
I-COPD ehambelana nebronchospasm Ewe Ewe
Unyango olunamandla lwe-hyperkalemia Ngaphandle kwelebheli Ngaphandle kwelebheli
Unyango olongezelelekileyo kwizifo zokuphefumla ezisandula ukuzalwa Hayi Ngaphandle kwelebheli
Ngaba iLevalbuterol okanye iAlbuterol isebenza ngakumbi?
ILevalbuterol kunye nealbuterol zithelekiswe kakhulu ngokubhekisele kwiziphumo zesifuba kunye neziphumo zeCOPD. Ngo-2015 ukufunda kuvavanywa abantu abadala ababelaliswe esibhedlele kunye ne-asthma okanye i-COPD exacerbations abaye baphathwa nge-levalbuterol okanye i-albuterol elawulwa yi-nebulization. Iziphumo zolu vavanyo lweklinikhi zifumanise ukuba iziphumo zeklinikhi zazifana phakathi kwamachiza amabini kwaye zombini zazisebenza ngempumelelo ekunciphiseni iimpawu ze-bronchospasm. Nangona kunjalo, indleko zonyango lwe-levalbuterol lwalubiza kakhulu kunexabiso lonyango lwe-albuterol, kwaye abaguli kwiqela levalbuterol babelaliswe esibhedlele ixesha elide kakhulu kunezigulana ezikwiqela le-albuterol. Ukuhlala esibhedlele ixesha elide kukonyusa iindleko zizonke zongenelelo.
UKUYA Uhlalutyo lweemeta kunye nokuphononongwa ngokuchanekileyo kwezilingo ezisixhenxe ezahlukeneyo, kubandakanya ngaphezulu kwe-1,600 yezigulana, kwenziwa ukuthelekisa i-levalbuterol ne-albuterol kwi-asthma ebukhali. Olu phononongo alufumananga mahluko ubalulekileyo phakathi kwamachiza xa kuthelekiswa iziphumo zeklinikhi ezinje ngezinga lokuphefumla, ukugcwala kweoksijini, kunye notshintsho kumthamo wamaphaphu. Umthamo wemiphunga ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba ngumthamo onyanzelekileyo wokuphefumla, okanye i-FEV1, kuncwadi lwezonyango. Olu pho nonongo luphelile ukuba akukho bungqina bokuxhasa ukukhetha i-levalbuterol ngaphezu kwe-albuterol kunyango lwe-asthma.
Ngelixa omabini la machiza ayasebenza, abagqirha banokulinganisa ukungabikho kobungqina bokugqwesa kwe-levalbuterol kunye nexabiso eliphezulu xa usenza isigqibo sokuba leliphi na iyeza oza kukuyalela. I-Levalbuterol yamkelwe kuphela kwizigulana zabantwana abaneminyaka emine nangaphezulu, ke i-albuterol iya kukhethwa kubantwana abancinci. Ngugqirha wakho kuphela onokukhetha amayeza afanelekileyo kwimeko yakho.
Fumana ikhuphoni kagqirha
Umyinge kunye nokuthelekiswa kweendleko zeLevalbuterol vs Albuterol
I-Levalbuterol sisiyobisi sikagqirha esihlala sigutyungelwe zizicwangciso zeinshurensi yorhwebo. Inokugutyungelwa licandelo le-Medicare Icandelo D okanye iSahlulo B ngokuxhomekeke kuxilongo. Ngaphandle kokugubungela, i-levalbuterol inokubiza ngaphezulu kwe- $ 170. Ikhuphoni le-SingleCare le-Levalbuterol ejwayelekile inokuhlisa ixabiso liye kwi-30 yeedola kwiikhemesti ezithatha inxaxheba.
I-Albuterol inokugutyungelwa yicandelo le-Medicare Icandelo D okanye iSahlulo B ngokuxhomekeke kuxilongo. Kukwahlala kugutyungelwe zizicwangciso zeinshurensi yorhwebo. I-Albuterol inokubiza imali engange-40 yeedola ngaphandle kokugubungela, kodwa ngekhuphoni evela kwi-SingleCare, unokufumana ifom yesiqhelo engaphantsi kweedola ezili-10 kwiikhemesti ezithatha inxaxheba.
Ngokuqhelekileyo i-inshurensi? Ewe Ewe
Ngokuqhelekileyo ihlanganiswe yiCandelo le-Medicare? Kuxhomekeke kwisifo Kuxhomekeke kwisifo
Umthamo osemgangathweni 25, 0.63 mg / 3 ml 25, 2.5 mg / 3 ml
I-Medicare copay eqhelekileyo Kuxhomekeke kwisicwangciso Kuxhomekeke kwisicwangciso
Ixabiso elilodwa Ixabiso: $ 30- $ 130 $ 10- $ 20
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zeLevalbuterol vs Albuterol
Ngelixa i-levalbuterol kunye ne-albuterol zikhetha ngokungamkelekanga ii-beta receptors kwizihlunu ezijolise ekungeneni kwomoya, kusenokubakho ukhuthazo lwe-beta-receptor yentliziyo ebangela ukonyuka kwentliziyo, eyaziwa ngokuba yi-tachycardia. Zombini i-levalbuterol kunye ne-albuterol zinokubangela uloyiko kunye nokungcangcazela. I-Migraine kunye nesiyezi kwaphawulwa nge-levalbuterol, kodwa hayi i-albuterol.
Oku ayenzelwanga ukuba ibe luluhlu olubanzi lweziphumo ezibi ezinokubakho. Nceda uqhagamshelane nomboneleli wakho wezempilo uluhlu olupheleleyo lweziphumo ebezingalindelekanga.
Tachycardia Ewe 2.7% Ewe 2.7%
Migraine Ewe 2.7% Hayi n / A
Dyspepsia Ewe 2.7% Ewe 1.4%
Iintlanzi zomlenze Ewe 2.7% Ewe 1.4%
Ukuba nesiyezi Ewe 2.7% Hayi n / A
Uxinzelelo lwegazi Hayi n / A Ewe 2.7%
Uvalo Ewe 9.6% Ewe 8.1%
Ukungcangcazela Ewe 6.8% Ewe 2.7%
Ixhala Ewe 2.7% Hayi n / A
Ukwanda ukhohlokhohlo Ewe 4.1% Ewe 2.7%
Usulelo lwentsholongwane Ewe 12.3% Ewe 12.2%
Ukuthimliswa Ewe 2.7% Ewe 6.8%
Isinusitis Ewe 1.4% Ewe 2.4%
I-edema edubulayo Ewe 1.4% Hayi n / A
Umthombo: Levalbuterol ( Yonke imihla I-Albuterol ( Yonke imihla )
Ukudibana kweziyobisi kweLevalbuterol vs Albuterol
Ngenxa yokufana kweekhemikhali, unxibelelwano olunokubakho lweziyobisi ze-levalbuterol kunye ne-albuterol ziyafana kakhulu. I-Azithromycin, isibulala-ntsholongwane esixhaphakileyo esisetyenziswa kwizifo eziphezulu zokuphefumla, kufuneka sithintelwe ngokudibeneyo ne-levalbuterol okanye i-albuterol xa kunokwenzeka. I-Azithromycin, xa ilawulwa nge-beta-agonists esebenza kancinci, inobungozi obandayo bokubangela ukwanda kwe-QT, uhlobo lwe-arrhythmia yentliziyo. Ukuba olu dibaniso kufuneka lusetyenziswe, umsebenzi wentliziyo yesigulana kufuneka ubekwe iliso kufutshane. Kubalulekile ukuba ufumane isiseko somsebenzi wentliziyo ngaphambi kokwenza la machiza ngaxeshanye.
I-Beta blockers, zihlala zisetyenziselwa ukulawula ukubetha kwentliziyo kunye noxinzelelo lwegazi, zisebenza ngokuchasene ne-beta-agonists. Imisebenzi yabo iya kuchasana. Ukuba isiguli kufuneka sibe zombini ibeta blocker kunye ne-beta-agonist, kusetyenziswa ibhloko blocker ye-cardioselective. Imizekelo ye-beta blockers ye-cardioselective ibandakanya i-atenolol kunye ne-metoprolol, phakathi kwabanye.
Olu ayilo luhlu lupheleleyo lokunxibelelana kweziyobisi okunokubakho. Nceda ufune ingcebiso yezonyango yengcali yezempilo ukuze uyiqonde ngokupheleleyo indibaniselwano yeziyobisi enokubakho.
Iziyobisi Iklasi yeziyobisi Levalbuterol I-Albuterol
Icaffeine Isiphumo seXanthine / CNS esivuselelayo Ewe Ewe
Pseudoephedrine Abazinqandayo Ewe Ewe
Isotalol I-beta blockers (abachasi be-beta) Ewe Ewe
Dronedone Ulwaphulo-mthetho Ewe Ewe
Umgca weNortriptyline I-Tricyclic yoxinzelelo Ewe Ewe
Sertraline Ukukhetha i-serotonin reuptake inhibitors (i-SSRIs) Ewe Ewe
Clarithromycin Amayeza okubulala iintsholongwane Ewe Ewe
Ketoconazole Izinto zokubulala iintlungu Ewe Ewe
Izilumkiso zeLevalbuterol kunye neAlbuterol
I-Levalbuterol kunye ne-albuterol inokubangela i-paradoxical bronchospasm, imeko apho i-bronchospasm yesigulana okanye ivili yenyani iba mandundu endaweni yokuphucula. Ukuba oku kuyenzeka, unyango kufuneka lumiswe kwangoko kwaye kufuneka kuqalwe unyango olutsha.
Ukuchithwa kwesifo se-asthma kunokuvela kwisithuba seeyure, iintsuku, okanye ngaphezulu. Ukuba isigulana sesifuba siqala ukufuna isixa esonyukayo se-bronchodilator ukulawula iimpawu zesifuba, oku kunokuba luphawu lokuba ukwenziwa kozinzo kuyenzeka. Izigulana ezifumana oku zinokufuna unyango lokuchasana nokudumba okunje nge-corticosteroids okanye utshintsho kwiirejimeni zabo zonyango.
I-Levalbuterol kunye ne-albuterol, ngakumbi kwiidosi ezingaphezulu kwesixa esinconywayo, kunokubangela iziphumo ezibi zentliziyo ezinje ngokunyuka kwentliziyo kunye noxinzelelo lwegazi. Kwezinye iimeko ezinzima, ukubanjwa kwentliziyo kuye kwenzeka. Ungaze udlule kumthamo ocetyiswayo ngugqirha wakho.
Amanqanaba e-serum potassium asezantsi, okanye i-hypokalemia, aqatshelwe nge-levalbuterol kunye ne-albuterol. Oku kunokubangelwa kukushenxiswa kwangaphakathi. Ngelixa la machiza ngamanye amaxesha esetyenziselwa ngaphandle kwelebheli ukuthoba amanqanaba e-potassium ngabom, esi siphumo kufuneka sibekwe esweni.
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga neLevalbuterol vs Albuterol
I-Levalbuterol sisiyobisi esisemthethweni esisebenza kancinci kwi-beta-agonist, ekwabizwa ngokuba yi-bronchodilator. Isetyenziselwa ukunyanga i-bronchospasm enxulumene nesifuba kunye ne-COPD. Kukwasetyenziselwa ngaphandle kwelebheli ukukunceda ukuthintela i-bronchospasm. Iyafumaneka ngohlobo lwe-inhaler yedosi ye-metered kunye nezisombululo eziza kusetyenziswa kwi-nebulizer.
I-Albuterol ikwalichiza likagqirha elisebenza kancinci kwi-beta-agonist. Ikwabizwa ngokuba yi-bronchodilator kwaye isetyenziselwa ukunyanga i-bronchospasm enxulumene nesifuba kunye ne-COPD kunye nokuthintela i-bronchospasm ebangelwa kukuzilolonga. Ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kubandakanya iipilisi zomlomo, izisombululo zomlomo, inhalers yedosi yemitha, kunye nezisombululo ekufuneka zisetyenzisiwe kwi-nebulizer.
Ngaba iLevalbuterol kunye neAlbuterol ziyafana?
ILevalbuterol kunye nealbuterol ziyafana ngokwemichiza, kodwa azifani ncam. IAlbuterol ngumxube wobuhlanga wee-enantiomers ezimbini zeekhemikhali, i-R-albuterol kunye ne-S-albuterol. Ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba yi-albuterol yobuhlanga. I-Levalbuterol yenziwe nje nge-R-albuterol, esebenzayo kwezi zinto zimbini.
Ngaba iLevalbuterol okanye iAlbuterol ingcono?
Ukuthelekisa kwakhona izifundo Ngokubanzi kubonisile ukuba i-levalbuterol kunye ne-albuterol baneziphumo ezifanayo zeklinikhi. Ababhali banokujonga iimpawu ezinje ngeendleko kunye neziphumo ezinokubakho xa ukhetha enye ngaphezulu kwenye.
Ngaba ndingayisebenzisa iLevalbuterol okanye iAlbuterol ngelixa ndikhulelwe?
ILevalbuterol kunye nealbuterol zombini zithathwa njengodidi C lokukhulelwa yi-FDA. Oku kuthetha ukuba akukho zifundo zilungileyo zonyango ezibonisa ukhuseleko xa ukhulelwe. La machiza kufuneka asetyenziswe kuphela xa izibonelelo ngokucacileyo zingaphezulu komngcipheko. Kule meko, i-albuterol inokukhethwa ngenxa yobukho beenkcukacha zembali ekusetyenzisweni kwayo ngexesha lokukhulelwa.
Ngaba ndingayisebenzisa iLevalbuterol okanye iAlbuterol ngotywala?
Akukho zichaso ngokuthe ngqo kwi-albuterol kunye notywala. Nangona kunjalo, utywala bunokucothisa isantya sokuphefumla kwaye buchaphazele ukusebenza kwemiphunga, nto leyo inxamnye nokunyanga i-bronchospasm.
Ngaba iLevalbuterol yindawo yokuhlangula?
Ewe, i-levalbuterol HFA yindawo yokuhlangula eboniswe ukuba isetyenziselwe ukunyanga isifo sombefu okanye i-bronchospasms ngenxa ye-COPD.
Ngaba iLevalbuterol yi-steroid?
I-Levalbuterol ayisiyi-steroid okanye ichasene nokudumba kwaye ayifanelanga ukuba isetyenziswe endaweni ye-steroid xa ukusetyenziswa kwe-steroid kubonisiwe, njengokupheliswa kwesifuba.
Uhlala ixesha elingakanani uLevalbuterol?
Ngokomndilili, iziphumo zedosi enye ye-levalbuterol inokuhlala iiyure ezintlanu ukuya kwezintandathu. ILevalbuterol iqala ukusebenza malunga nemizuzu eli-15 emva kolawulo.
Indlela yokuchonga kunye nokunyanga isifo sesihlanu (parvo) ebantwaneni
Isikhokelo esiphakamileyo se-5 soMnyango wokuTsala iiBhari
yintoni amanqanaba aphezulu asezantsi eswekile yegazi
yintoni umahluko phakathi kwe-nexium kunye ne-prilosec
Ndingayithatha kangaphi icacisa i-d
Ngubani igama eliqhelekileyo le-atenolol
ingakanani iapile cider iviniga yokwehlisa uxinzelelo lwegazi